အဘ ခွင့်လွှတ်ပါ အဘ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဘ ခွင့်လွှတ်ပါ အဘ
အဘ ခွင့်လွှတ်ပါ အဘ
Posted by moonpoem on May 27, 2014 in Creative Writing | 15 comments
အရင် တစ်ပတ်က အုပ်စုနဲ့ ပုဂံ၊ပုပ္ပါးဘက် Tour သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
အုပ်စုနဲ့ သွားတဲ့အခါ ကိုယ်ရှင်းပြတာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ နားထောင်ပြီး မေးမြန်းတဲ့သူတွေရှိသလို ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငေးကြည့်ပြီး ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက် ဖြစ်နေပြီး တစ်ရေးနိုးမှ သိချင်တာကို ပြန်မေးသူ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ထူးထူးခြားခြား အနေနဲ့ ဒီအုပ်စုထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လို စကားထထပြောတတ်တဲ့ဂျပန်အဘိုးကြီးတစ်ဦး ပါပါတယ်။
သူအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကလည်း သိပ်ပြီး ရိုးစင်းတော့ မခက်ခဲလှပါဘူး။
သူက ၀က်အစ်စ်ရွာနိမ်းဆိုရင်ကျွန်မကလည်း ရွာနိမ်းအစ် ညောင်ပင်သာ။ သူက ဘဲရီးနိုက်စ်ဆိုရင်ကျွန်မကလည်း အိုးရက်စ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ အိုကေနေကြတယ် ဆိုပါတော့။
ဒီလိုနဲ့ ပုပ္ပါးဘက်ရောက်တော့ ပုပ္ပါးနတ်တောင်အကြောင်း အဘဘိုးမင်းခေါင်ရဲ့ အကြောင်းတွေကိုကျွန်မ ပြောပြရှင်းလင်းပါတယ်။မနေ့ က ပုဂံမှာသွားခဲ့တဲ့ စေတီပုထိုးတွေ၊ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ရုပ်ပွားတော်တွေကို ဖူးမြင်ခဲ့ရပေမယ့် ဒီပုပ္ပါးဘက်မှာတော့ အနည်းငယ် ကွဲပြားတဲ့အကြောင်းကိုပါ။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်ပွားတော်ဆိုရင် သင်္ကန်းဝတ်ထားပြီး လက်တော်က တရားဒေသနာဟောတော်မူပုံ၊ တရားအားထုတ်နေပုံတွေဖြစ်ကြပြီး အခု ဒီပုပ္ပါးမှာ ရှိတဲ့ အဘဘိုးမင်းခေါင်ရဲ့ ရုပ်ထုဟာ ဆိုရင်တော့ သာမန်လူတွေဝတ်တဲ့ တိုက်ပုံ၊ ပုဆိုးဝတ်ထားပြီး ရေနွေးကြမ်း သောက်နေပုံ၊ တင်ပျဉ်ခွေထိုင်ပုံ၊ ခြေချိတ်ထိုင်ပုံတွေနဲ့ ကွဲပြားမှုကို လေ့လာလို့ ရတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မ အေးအေးဆေးဆေး ရှင်းပြနေပါတယ်။
အခြားသော အကြောင်းအရာတွေ ရှင်းပြပြီး နောက်မှာတော့ လှေကားထစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ပုပ္ပါးနတ်တောင်ကို ကျွန်မတို့ တတွေ တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မတို့ သွားလို့တစ်ဝက်လောက်မှာတော့တော်တော်များများက ဖလက်ပြပြီး နားကုန်ကြပါပြီ။ လူအများကြီး နားလို့ ကျယ်တဲ့နေရာ မဟုတ်တာကြောင့် ကျွန်မက ရှေ့ နား နည်းနည်း ဆက်သွားပြီးရင် လှေကားတစ်ချိုးမှာစောင့်နေမယ့် အကြောင်းမှာခဲ့ပြီး ဆက်တက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
တက်တုန်းခဏမှာပဲ အင်္ဂလိပ်လို သိပ်ပြောချင်သော ဧည့်သည်ဂျပန်အဘိုးကြီးက လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ရွှေ……. ပလိစ် ကမ်း ဟီးရား(Please Come Here)တဲ့။ ကျွန်မလည်း အိုးရက်စ်ဆိုပြီး သူလှမ်းခေါ်တဲ့ နားနေဆောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အမယ်..သူက ဟုတ်နေတာ။ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ ဝင် အဘတွေ စကားစုပြီးထိုင်ပြောနေတဲ့ ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းနား ထိုင်ပြီး ရယ်လို့ မောလို့ ။ ကျွန်မလည်း ရောက်သွားရောမေးလိုက်ပုံက ရွှေ… ဟူးအစ်စ် ဘိုးမင်းခေါင်တဲ့။ကျွန်မလည်း ရုတ်တရတ်တော့ ကြောင်သွားတယ်။ ပြီးမှ သူက ဆက် ပြောတာ အမောကိုဆို့ ရောပဲ။ နင်ခုနက ကားပေါ်မှာ ရှင်းတယ်လေ ဒီတောင်ရောက်ရင် ရေနွေးကြမ်းခွက် ကိုင်ထားတာ ဘိုးမင်းခေါင်ဆို ဒီမှာ ရေနွေးကြမ်းခွက် ကိုင်ပြီး သောက်နေကြတာ ၄ယောက်တောင် ဘယ်သူက ဘိုးမင်းခေါင်တုန်းတဲ့။
ဟိုက် ရှာလပတ်ရည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မလည်း အိုးမရက်စ်တော့ဘူး။အိုး…နိုး….
ဆိုပြီး သူ့ကို ခေါ်ထုတ်လာခဲ့ရတယ်။တော်ကြာ ဟိုက ဘဘများက ရေနွေးကြမ်းခွက်တွေနဲ့ ကောက်ပေါက်မှ သေဦးမယ်။ဘယ်နှယ့်တော် ရှင်းတုန်းက သေချာနားမထောင် ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်နေပြီး ခုမှ လူကို ပြေးပေါက်မှားအောင် လုပ်တဲ့လူကြီး ကျွန်မဖြင့် စိတ်တိုမိတာတအားပါပဲ။
ဒါလည်း မပြီးသေးဘူးနော်။တောင်ပေါ်မှာ ဘုရားဖူးပြီး အပြန် အောက်ပြန်ဆင်းလာတော့ ဘုရားစောင်းတန်းမှာ တင်ပျဉ်ခွေပြီး နားနေတဲ့ မြန်မာအဘိုးတွေ တွေ့ ရပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါလည်း ဟိုဂျပန်ကိုယ်တော်ချောက ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်နေလို့ ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ် ကြိုရှောင်တဲ့အနေနဲ့သူ့ ကို ကိုယ့်နားခေါ်ထား မျောက်တွေ အစာကျွေးခိုင်းပြီး အောက်ထိ အတူတွဲခေါ်ခဲ့တယ်။အေးရော။
အကြောင်းအရာ တွေ ကို ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ စိတ် နဲ့ ကြည့်တတ်တာ အရမ်းကောင်းတယ်။
အဲ့လိုသာ​ပြောရရင်​ဖြင့်​ မြန်​ပြည်​တစ်​လွှား ဘိုးမင်း​ခေါင်​​တွေများမှ များ ဟားဟားဟား
နောက်ဆို မောင်ကောင်းထိုက် ၀ယ်မဖတ်တော့ဘူး
လကဗျာကိုပဲ စောင့်ဖက် အဲ အဲ လကဗျာ ရေးတာကို စောင့်ဖတ်တော့မယ်
ဒီ လို ဟာသ ဥာဏ်မျိုး ဆိုတာက လုပ်ယူလို့ ရတာ မဟုတ်
လမ်း မှာ ကျွဲ တွေ ဘာတွေ တွေ့ရင် တောင် နတ် နဲ့ မှားပြီး သွား နှုတ် ဆက် နေဦးမယ်နော်…
ကြိုပြီး သတိ ပေးထားလိုက်ပါဦး အဲ့ဒီ ဂျပန် အဘကြီး ကို…း)
ကောင်းတယ်ဗျို့ မနက် ထထချင်းဒီလို စာမျိုးဖတ်
လိုက် ရတာ လူ ကိုလန်းဆန်း ပျော်ရွှင် သွားတာပဲ
လကဗျာ ရေ ဆက် လျှောက် ဆက် လျှောက်
နောက်ကလိုက် လာမယ် အားပေးမို့ 
ရေးလည်း ရေးတတ်ပါပေ့ ၊ ဟာသဉာဏ်လည်း ရွှင်ပါပေ့ moonpoem ရယ်…
လောကကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမြင်တတ်တာ အသက်ရှည်သတဲ့…
အဲသည့်ဂျပန်ကြီး ၃၇မင်းနတ်နဲ့တွေ့ရင် ဘယ်လိုပြောမယ်မသိ… ဟီ ဟိ
တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲပေါ် ဟာသဥာဏ်လေးနဲ့တွေးနိုင်တာ သဘောကျသဗျာ
ဟာသဥာဏ် အပြည့်ရှိသော ကလေးမလေးပါ တကား…။
အော် တော်သေးတာပေါ့… ရေနွေးခွက်ကိုင်တာ ဘိုးမင်းခေါင် လို.ပြောလို.. ပန်းစည်းကိုင်ထားရင် ပုပ္ပားမယ်တော်လို.များ ပြောလိုက်မိလို.ကတော့.. အဲဒီက ပန်းရောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေ အကုန် လိုက်မေးနေတော့မှာ… ဟဟဟဟဟဟဟ…
အင်းနားသတ်တီဆဲဗင်း အောက်တားသတ်တီဆဲဗင်းအကုန်သာပြောပြလိုက် ဘယ်နတ်လိုက်ရှာရမှန်းမသိ ဖစ်တွားမယ်
…သူက ၀က်အစ်စ်ရွာနိမ်းဆိုရင်ကျွန်မကလည်း ရွာနိမ်းအစ် ညောင်ပင်သာ….
ကြည့်စမ်း…ရုပ်တည်ကလေးနဲ့ ရီစရာ ရေးတတ်လိုက်တာ မထင်ရဘူးနော်…
သများကို အရှူံးခံပြီး စာအုပ်ထုတ်ပေးမယ့်သူရှိရင် စာအုပ်ထုတ်ချင်ပါရဲ့ အဟီး:-D
ရွာထဲမှာ နောက်တခါရီ သွားပါတယ်။